» ‘यौनलाई स्वस्थ रुपले स्विकार्नुहोस्’-ओशो
१४ माघ २०७७, बुधबार २१:११
जबकी अवस्था भने फरक छ । मानिसहरु कामवासनाबाट दिक्क छन् । त्यसैले, पोस्टरको बेग्लै मज्जा छ । आखिर, यो पोस्टर कसले हेर्छ रु पोस्टर हेर्न को जान्छ ?
यो माग कसरी पैदा भयो त रु त्यसलाई हामीले पैदा ग¥यौं । स्त्री–पुरुषलाई एक अर्काबाट टाढा राखेर हामीले त्यसको माग पैदा ग¥यौं । त्यो मागलाई पूरा गर्न कुनै व्यक्ति जान्छ, हामीलाई लाग्छ, गलत भईरहेको छ । त्यसैले, बाधा खडा गरिन्छ । किनकी उसको बाटोमा जति धेरै अवरोध खडा भयो, आफ्नो माग पूर्तिका लागि ऊ त्यति नै धेरै नयाँ नयाँ बाटो खोज थाल्छ । किनकी मागले पूर्ति त खोज्छ ।
यहाँको पुलिसले के हेरिरहेको छ ? पुलिसहरु यस्ता कुरा किन बन्द गर्दैनन् ? यो कस्तो अश्लील देश रहेछ रु पाँच सय मानिसको बीचमा बसेर यिनीहरु आँखा बन्द गरेर पे्रममा लिप्त भएका छन् । प्रेम प्रकट गरिरहेका छन् । , आखिर यिनीहरु कस्ता मानिसहरु हुन् ? यस्तो असहनीय छ । पुलिस के गर्दै छ भन्दै उनी त्यही हेर्थे ।
तपाईले पाँच सय व्यक्तिलाई देख्नु भएको छ, कसैले पनि चासो दिएका छैनन् । कसैलाई चासो राख्न जरुरी पनि छैन । किनकी यो उनीहरुको आफ्नो कुरा हो । फेरी दुई व्यक्तिले यो उमेरमा एक अर्कालाई प्रेम गर्छन् भने पाप लाग्ने कुरा नै के छ रु र, यदी उनीहरुमा प्रेममा आँखा बन्द गरेर नजिक बस्छन् भने यसमा समस्या नै के छ ।
तपाइलार्ई किन समस्या भइरहेको छ रु न तपाईलाई कसैले अंगालो मारेको छ, न त कसैले तपाईलाई प्रेम गरिरहेको छ ।